Cryptocurrencies: been abuur ama ganacsi dhab ah? | vfxAlert official blog
Cryptocurrencies: been abuur ama ganacsi dhab ah?
Lacagtu waa marxalad muhiim u ah horumarka qofka qof ahaan iyo unug bulsho. Lacagta ayaa marin adag ka soo martay qaabkii "sarrifka" iyadoo loo gudbiyay qaababka "lacag bixinta". Hadda lacagta ayaa ku dhowaad joogsatay inay noqoto mid dhab ah, kaararka caagga ah ayaa ku dhowaad beddelay lacag caddaan ah. Caadi ahaan, ikhtiyaar aad u daran waa inay u muuqatay qaab lacag dijitaal ah oo buuxda. Jaleecada hore, wax walba way adag yihiin, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan u sheegno lacag sameynta cryptocurrency iyadoo la adeegsanayo calaamadaha vfxAlert .
Taariikhda iyo muuqaalada
Dadka badankood, "lacagta dhijitaalka ah" waxay kaliya la xiriirtaa Bitcoin, laakiin tani waa khalad. Horumarka ugu horreeyay ee fikradeed ee waxa aan hadda ugu yeerno cryptocurrencies ayaa soo muuqday muddo dheer ka hor BTC-ga ugu horreeya. Tikniyoolajiyadda "saxiixa indho la'aanta ah", oo labada dhinac ee macaamilku ay yihiin kuwo aan la magacaabin, iyo keydinta macaamil ganacsi oo aan waxba laga beddelin keydka macluumaadka (nidaamka xannibaadda) ayaa markii ugu horreysay lagu sheegay shaqooyinkii David Chaum, Adam Beck iyo Nick Szabo oo dib loogu soo celiyay 1983- 1997.
Isbeddelka aragtida ee ficil ahaanta ayaa dhacay Oktoobar 2008 ka dib muuqaalka maqaalka "Bitcoin oo ah kaash dijital ah oo fac-u-dhig ah" by gaar ah "Satoshi Nakamoto" internetka. Isagu wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee xalliya dhibaatooyinka waaweyn ee lacagta aan la garanaynin: lacagta been abuurka ah iyo laba-kharash-gareynta . Dib u adeegsiga cutubyada lacageed macquul ma'aha marka la isticmaalayo xannibaadda, lacag kasta oo cusubna waa inay lahaataa summad gaar ah oo hash ah. Qoraagu wuxuu doorbiday inuu ahaado mid qarsoodi ah oo loo igmaday horumarin dheeri ah oo nidaamka lacag bixinta ah ee hay'adda aan macaash doonka ahayn ee Bitcoin Foundation. Laga soo bilaabo xilliga daabacaadda illaa waqtigan la joogo, isku dayo badan ayaa la sameeyay si loo ogaado cidda "Nakamoto" tahay, laakiin ma ay shaqeyn.
Waa maxay cryptocurrency ?
Kuwa doonaya inay si faahfaahsan u bartaan astaamaha farsamada ee hirgelinta cryptocurrencies waxay ka raadin karaan macluumaad faahfaahsan shabakadda, iyo kuwa bilowga ah, waa ku filan tahay inay ogaadaan mabaadi'da aasaasiga ah:
Macaamil maaliyadeed oo qarsoodi ah ayaa la arkay. Haddii aad furato koonto Bangi waa inaad siisaa macluumaad shaqsiyadeed oo dheeri ah isla markaana ilaalisaa ansaxnimadooda, inaad furto jeebka loo yaqaan 'cryptocurrency' xitaa uma baahna E-mailka, si fudud u rakibo barnaamijka, ku dar lacag isla markiiba bilaw bixinta. Dhibaatada kaliya ee haysata qarsoodiga oo dhameystiran waa awood la'aanta in dib loo soo celiyo lacag bixin khalad ah.
Nidaamka lacag-bixinta malaha xarun dhexe oo dejinta iyo emission. Wallet (marka laga reebo noocyada internetka iyo moobiilka) waxay u shaqeeyaan sidii noodh buuxa oo shabakadda ah waxayna ku jiraan nuqul buuxa oo ka mid ah 'Blockchain' laga bilaabo macaamilkii ugu horreeyay. Habkani wuxuu hubinayaa in nidaamku 100% caafimaad yahay - ku guuldareysiga hal ama in ka badan oo noodhadh ah ma aha mid muhiim ah. Si ka duwan nidaamyada lacag bixinta "caadiga ah" sida SWIFT iyo Visa / MasterCard.
Blockchain wuxuu damaanad qaadayaa sharafta macluumaadka maaliyadeed . Suurtagal maaha in la beddelo xogta macaamillada la dhammaystiray "dib-u-celin", taas oo meesha ka saareysa laba-kharash-bixin. Noodhka (jeebka) ayaa kaydiya (ama inta badan) keydka macluumaadka, macluumaadka wuu furan yahay waana la arki karaa. Sida laga soo xigtay Nakamoto, tani waa inay kordhisaa amniga shabakadda lacag bixinta, laakiin tani waa arrin muran badan dhalisay.
Hadda oo aan ognahay mabaadi'da aasaasiga ah, waxaan qeexi karnaa waxa lacagta dijital ahi tahay:
A cryptocurrency (digital cash / currency / money) - oo ah qaab qarsoodi ah oo lagu bixiyo alaabooyinka iyo adeegyada ku saleysan algorithms-ka loo yaqaan 'cryptographic algorithms', oo aan lahayn lacag u dhiganta. Arrinta cutubyada lacageed (arrin) kuma jirto gacanta bangiyada ama qaab dhismeedka dowladda. Lacagta waraaqaha loo yaqaan 'Cryptocurrency banknotes' waxaa loogu beddeli karaa lacag dhab ah (Fiat) sicirka sarrifka ah ee ay ku heshiiyeen ka qaybgalayaasha macaamilku.
Xagee ayuu ka yimaadaa cryptocurrency?
Ka dib markaad akhrido sadarka hore, su'aal dabiici ah ayaa soo baxda - haddii aysan jirin xarun qiiqa adduunka, haddaba xagee ka yimaadaan lacagta cusub? Jawaab: adeegsiga macdanta , taasoo keentay koodhadh cusub oo haash ah (baloogyo) si loo xaqiijiyo bixinta. Koodh kasta oo cusub, abaalmarin ayaa lagu bixiyaa lacagta dijitaalka ah ee u dhiganta, taas oo markaa loo beddeli karo lacag dhab ah oo, sidaas awgeed, faa'iido ka helayso.
Haddii aad go'aansato inaad abuurto lacag cusub waa inaad ogaataa in dhammaan noocyada loo yaqaan 'cryptocurrencies' loo qaybiyay laba kooxood
• Tirada ugu badan ee qadaadiicda nidaamka waa xaddidan tahay (oo sidaas xakamaynaysa sicir-bararka), laakiin si tartiib tartiib ah ayey u soo baxaan (miinaysan yihiin), iyo raadinta baloogga xiga wuxuu u baahan yahay awood xisaabeed oo aad u badan. Tani waa sida ay u shaqeeyaan Bitcoin iyo halbeeggeeda, sida LiteCoin, iyo Ethereum.
• Dhamaan lacagta qadaadiicda ah horay ayaa loo soo saaraa, waxaa lagu qoraa xannibaadda waxayna ku hoos jiraan gacanta dhowr horumariyayaal ama urur aan faa'iido doon ahayn. Si aad u hesho abaalmarin, adeegsadehu waa inuu rakibaa node xaqiijinta macaamilka (node) iyo hawlgallada badan, macaashka weynaanayaa. Tani waa sida Ripple, Peercoin iyo lacago kale oo badan sanadihii la soo dhaafay u shaqeeyaan.
Waa wax aan macquul ahayn in lala tartamo "warshadaha" macdanta si loo helo Seeraar cusub celceliska isticmaalaha. Way fiicantahay in loo qoondeeyo kombiyuutar gaar ah hoosta "node" oo aad hesho xitaa dakhli ka yar, laakiin xasilloon, ka ganacsiga ganacsiga tooska ah ee loo yaqaan 'cryptocurrency live' .
Sidee loo helaa oo loo qarash gareeyaa?
Waxaad ku buuxin kartaa dheelitirkaaga jeebka adoo adeegsanaya sarrifleyaasha elektaroonigga ah ee internetka ama adeegyo khaas ah, halkaas oo aad xitaa ka heli karto kaarka caagga ah ee Visa / Mastercard ee lacag-ka-bixidda ee ATM-yada iyo lacagaha aan lacagta ahayn. Lacagaha waaweyn waxaa taageera dhammaan is-weydaarsiyada waaweyn ee is-weydaarsiga, taas oo faa'iido u yeelan karta qorsheynta canshuuraha.
Sidee loo qarash gareeyaa lacagta dhijitaalka ah? Waxaa jira dalabyo ku filan oo laga helo internetka laga bilaabo helitaanka adeegyada ciyaaraha iyo adeegyada elektaroonigga ah illaa gaarsiinta alaabada dhabta ah. Run, kiiskan dambe, waxaa lagama maarmaan ah in la caddeeyo xogta qofka qaata, taas oo yareyneysa heerka sirta, laakiin waxaa suurtagal ah qeyb ka mid ah dadka isticmaala.
Sidee lacag loo sameeyaa?
Haddii aadan ku mashquulin macdanta markaa ikhtiyaarka ugu fudud ee aad ku iibsan karto lacagta birta ah ee dijitaalka ah, sug kobaca oo ku iibso qiimaha ugu sarreeya. Maalgashadayaal badan ayaa sidaas sameeyay bishii Diseembar 2017 markii isweydaarsiga Chicago Mercantile uu ku daray mustaqbalka Bitcoin mustaqbalka.
Intii lagu gudajiray mudada ugu xiisaha badan, qiimaha wuxuu gaadhay $ 20 kun hal mustaqbal BTC? Kadib waxaa jiray burbur xoog leh, qiimaha waligiis kuma soo laaban, wuxuu ku haray heerka 9.5-10 kun oo doolar. Dabcan, tani waa wax badan, laakiin meesha ugu hooseysa ee "xigmaddu" waxay hoos ugu dhacday 4.5-5 kun oo doolar malaayiin maal-gashadeyaal ahna waxay heleen khasaarooyin aad u badan.
Ganacsatada xirfadleyda ah iyo maalgeliyeyaasha, habdhaqanka suuqaas ayaa ahaa mid la fahmi karo. Marka hantidu aysan ku xirnayn qaybta dhabta ah ee dhaqaalaha oo kaliya qiimaha ayaa sameeya qiimaha, aadanaha "rajo-gelinta" iyo ganacsiga cryptocurrency waxay muujinayaan hoos u dhac ama kororka heerka 20-30% bishiiba waxay umuuqataa mid macquul ah. Laakiin, waxay ku kasbadaan dhaqdhaqaaqa sicirka , waxayna ku guuleysteen laba jeer: labadaba markii qiimaha uu kordhay, iyo markii uu si dhakhso leh u dhacay. Intaa waxaa sii dheer, dhaqdhaqaaqa ku dhowaad dhammaan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' waxaa si fiican looga shaqeeyay moodello la xaqiijiyay oo falanqeyn farsamo ah.
Siyaabaha kale ee dakhliga loo abuuri karo waxaa ka mid ah laba kale:
Ma sharci baa?
Arrintaan waa in loo tixgeliyaa sida soo socota: sharcinimada arrinta (macdanta), lahaanshaha iyo wareejinta (macnaha bixinta) ee kripto.
Aynu ku bilowno macdanta. Ku dhowaad dhammaan waddammada oo dhan, helitaanka iyo keydinta lacagta birta ah ee dijitaalka ah wax saameyn ah oo xagga sharciga ah kuma lahan milkiilayaashooda. Xawilaadaha aan ganacsiga ahayn ee u dhexeeya boorsooyinka iyo u beddelashada lacagta Fiat sidoo kale waa la oggol yahay (faahfaahin ayaa looga baahan yahay waddan gaar ah, laakiin xaaladda guud waa mid wanaagsan).
Iyada oo loo marayo habka lacag bixinta, xaaladdu way ka sii dhib badan tahay. Marka EU, Japan, Hong Kong waxay u oggol yihiin adeegsiga kriptolojiyada wareegga ganacsiga, si ka duwan Mareykanka, halkaasoo ay la mid yihiin dammaanadaha oo shati gaar ah looga baahan yahay iibsashadooda / iibintooda. Sannadkii 2020, tani waxay noqotay caqabad aan laga gudbi karin si loo sii daayo lacagta Gram (TRON) ee ka socota farriinta Telegram. Horumariyayaashu kuma guuleysan inay heshiis is afgarad sharci ah la gaaraan Guddiga Amniga Mareykanka (SEC) waana in la xakameeyo mashruuca. Dhibaatooyin isku mid ah oo ku saabsan xakameeyayaasha labada dhinac ee Atlantic waxay Facebook ku heleen lacagteeda Libra, taas oo ahayd in laga tago.
Haddii aan dhinac uga kacno halkudhigyada taageerayaasha lacagaha aan la aqoon ee ku saabsan "shirqoolka nidaamka maaliyadeed ee adduunka ee ka dhanka ah mustaqbal ifaya" waa in la aqoonsadaa in aqoonsi la'aanta dhinaca aragtida gobolka ay tahay caqabadda ugu weyn ee hortaagan aqoonsiga lacagaha dijitaalka ah. Marka hore, tusaalaha dukaanka alaabada la mamnuucay ee SilkRoad wuxuu adkeynayaa in la hubiyo sharcinimada lacagaha lana xisaabiyo milkiilaha bogaggaas, marka labaadna, haddii labada dhinac ee wax kala iibsiga aan la aqoon, sida loo ilaaliyo xuquuqda iibsadaha alaabada iyo adeegyada khayaanada. Sidaa darteed, horumar la taaban karo ee jihadaani waxay u egtahay in wax yar laga filan doono.
Maxayse tahay natiijada?
Waxaan ka fiirsanay sida ay u shaqeyso lacagta loo yaqaan 'crypto currency' , mar labaadna waxaan weydiisaneynaa, waa suurtagal in lacag lagu kasbado. Haa, waa run, haddii aadan u tixgelin hantidan inay tahay hab lagu keydiyo lacagaha nooca dhigaalka bangiga. Dakhligu wuxuu kaliya ka suurta galaa ganacsiga - ganacsiga kor u kaca isbeddelka, ka qayb qaadashada heshiisiinta haddii lacagtu u oggolaato oo ay ka faa'iidi karto wax ka badan kan Forex iyo suuqa saamiyada.
Gar-qaadidda sarrifka . Si ka duwan keydka dhexe iyo xitaa suuqa lacagta, in kasta oo maqnaanshaha hal xarun dejin ay ilaalinayso dheelitirka xigashooyinka meheradaha ganacsiga cryptocurrency, gabi ahaanba waa madaxbannaan yihiin. Tani waxay ka dhigan tahay in farqiga u dhexeeya sicirka isku Bitcoin uu ku filnaan karo inuu dakhli ka soo xaroodo kaliya howlaha iibka / iibinta tusaale ahaan "dadban". Shuruudda kaliya: deebaaji ballaaran, kormeer joogto ah oo sicirka ah iyo falcelin deg deg ah oo ku saabsan calaamadaha cryptocurrency.
Maalgelinta maalgelinta cryptocurrency iyo mashaariicda ICO (Bixinta lacagta birta ah ee bilowga ah). Labada ikhtiyaar waxay bixiyaan in maalgashadaha lagu beddelayo maalgashiga uu helo "tokens" dijitaal ah oo la mid ah saamiyada ama saamiyada saamiyada. Kadibna waxay kordhiyaan dulsaar, ama waxaa lagu kala iibsanayaa sarrifka saamiyada. Sida tirakoobka ee 2-3 sano ee la soo dhaafay ay muujiyeen, in badan oo ka mid ah mashaariicdan oo kale waxay ahaayeen haramiyada maaliyadeed ee banal. Markaa kaliya inta ugu liidata ee haysata lacag dheeri ah ayaa maalgashan karta iyaga.